China Mini Excavator 1.6Tons - orinasa ME16 sy mpamatsy | Bonovo
Famaritana ny ME16
Track Gauge 1130mm
Araho ny halavany 1450mm
Fanesorana ny tany 437mm
Taratra boribory farany 740mm
Sakany ambanin'ny kodiarana 1040mm
Sakan'ny lalana 230mm
Haavo làlana 320mm
Ny halavan'ny fitaterana 3160mm
Haavo ankapobeny 2377mm
Parameter ankapobeny an'ny ME16
Milanja lanja 1400kg
Fahaizana bucket 0.045m3
Fitaovana miasa Backhoe
maotera MODELY Yanmar3TNV70
Hery / hafainganam-pandeha naoty 10 / 2200kw / r / min
Torkia farany ambony 51.9 / 1600N.M / r / min
hafainganam-pandeha sy hery mihady Hafainganam-pandehanana Max 3.5km / h
Fahaizana kilasy 30 °
Angovo mihady siny 10,5KN
Herin'ny fandadiana sandry 6.5KN
Max hery miasa 13.5KN
Fanerena amin'ny tany 35kgf / cm2
Track fitaovana Làlan'ny fingotra
Karazan-tsarimihetsika mihenjana Varingarina menaka
Taratra boribory Max 3470mm
Max lalina mihady 2150mm
Haavony mihady Max 3275mm
Haavony fanariana Max 2310mm
Max lalina mihady lavaka 1740mm
Tariby misy savily kely 1440mm
Max Dozer fiakarana avo 262mm
Max Dozer manaloka lalindalina 192mm
Fampiharana - opération d'exploitation mini
Fepetahana sy mari-pankasitrahana amin'ny kora
Fonosana fitoeran-javatra sy fonosana LCL
1.Mba hafiriana ny fotoana fiantohana mini-excavator?
2.izay fanamarinana ny mini excavator anananao?
A: CE, ISO9001, SGS, sns. Raha mila mari-pankasitrahana hafa ianao ho an'ny firenena samihafa, afaka manohana izahay hampihatra;
3.Maha mety ve ny mitsidika ny orinasa misy anao?
A: Ny mpanjifa rehetra dia raisina an-tsitrapo hitsidika ny orinasanay, ampahafantaro amin-katsaram-panahy ny fandaharam-potoananao fa hikarakara izany ho anao izahay.
4.Inona no tombony azontsika raha ampitahaina amin'ny mpanamboatra / ozinina?
- Vidiny mifaninana-miasa izahay amin'ny maha-mpivarotra enta-mavesatra ny milina fanorenan'i Shina isan-karazany, ary voahaja amin'ny vidin'ny fivarotana tsara indrindra isaky ny avy. Avy amin'ny fampitahana sy valiny marobe avy amin'ny mpanjifa, ny vidinay dia mifaninana kokoa noho ny mpanamboatra / ozinina hafa.
- Ny traikefa amin'ny indostria: ny traikefanay momba ny indostria dia afaka namboarina tamin'ny taona 1990 ary nanangana ny orinasanay manokana izahay tamin'ny 2006.
- Valiny haingana -Ny ekipanay dia misy vondron'olona mazoto sy mahay miasa, miasa 24/7 hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa sy ny fanontaniana hatrany. Ny ankamaroan'ny olana dia azo vahana ao anatin'ny 12 ora.
5.Mba hafiriana ny vidin'ny vidintsika?
Izahay dia mpamatsy malala sy sariaka, tsy mitsiriritra velively ny tombotsoan'ny rivotra. Amin'ny ankapobeny, ny vidinay dia miorina mandritra ny taona. Tsy miova afa-tsy amin'ny toe-javatra roa izahay:
1) Ny tahan'ny USD: Ny RMB dia miovaova arakaraka ny tahan'ny fifanakalozam-bola iraisam-pirenena.
2) Nanamboatra ny vidin'ny milina ireo mpanamboatra / orinasa, noho ny fiakaran'ny vidin'ny asa sy ny vidin'ny akora.
Teo aloha: Mini Excavator 1 Ton - ME10
Manaraka: Mini Excavator 2 Ton - ME20
F: Iza amin'ireo teny fandoavam-bola azo ekena
tranga mini excavator
excavator mini fanday
komatsu mini excavator excavator kely amidy
kubota mini excavator amidy
BONOVO Medium Digger xcavator Mach mihetsika amin'ny tany ...
BONOVO DIGDOG DG25 mini digger excavator 2.5 ka ...
BONOVO DIGDOG DG12 Mini Excavator miaraka am ...
BONOVO DIGDOG DG18 1,8 taonina digali mini digali ...